Luis Suarez ayaa ugu dambeyn ku dhawaaqay finalka
Weeraryahanka kooxda Atletico Madrid ee Luis Suarez ayaa shaaca ka qaaday sida uu uga cadhooday diidmada Barcelona ee xagaagii 2020, iyo waliba hadaladii ka cadhooday.
Tababaraha reer Holland Ronald Koeman ayaa badalay Quique Setien oo ku sugnaa Barca wuxuuna cadeeyay in Luisito uusan qeyb ka aheyn qorshihiisa mustaqbalka.
Luis Suarez ayaa haatan ah gooldhaliyaha ugu sareeya La Liga wuxuuna sidoo kale ka caawiyay Rojiblancos inay hogaanka u hayaan horyaalka.
Suarez ayaa sheegay hadaladii xanuunka badnaa ee loo sheegay inuu ka tago Camp Nou inay ahaayeen “inuu aad u da ‘weyn yahay inuu ciyaaro heerka ugu sareeya kubada cagta”.
34 jirkaan reer Uruguay ayaa u sheegay France Football: “Waxa run ahaantii i dhibay waxay aheyd markii ay ii sheegeen inaan aad u weynahay inaan ka ciyaaro heerka ugu sareeya, mana aanan shaqeyneynin horay. Uma sameyn karin koox weyn, taasi wuxuu ahaa wixii aanan jeclayn.
“Haddii aanan wax u qaban koox sida Barca ah seddex ama afar sano, waan fahmi lahaa. Waxaan dhaliyey in ka badan 20 gool xilli ciyaareedkii. Had iyo jeer waxaan haystay xog goolal fiican, waxaan kaliya ka dambeeyay Leo (Messi).”
“Maanta waxaan arki karnaa inaysan sahlaneyn u ciyaarida Barca, inbadan oo kamid ah ciyaartoydii lasoo saxeexday halkaas may lahayn heerka ay ku sugantahay, waxaan u ciyaaray Barca mudo lix sano ah isla heerkaas waanan sameeyay wixii la iga doonayay.”
The UN calls on both sides in Libya to conform
the primary doses of Ebola vaccine are